တိကျတဲ့ PROCESSOR ကို CORE ကိုအတွက်အသုံးပြုမယ့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို - ဆောင်းပါးများ - 2019
တိကျတဲ့ Processor ကို core ကိုအတွက်အသုံးပြုမယ့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့ဘယ်လို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်ဦးအရင်းအမြစ်-intensive အားပိတ်ပြီးမရနိုငျသော application ကို၎င်း, တစ်ချိန်တည်းမှာသောကွန်ပျူတာ၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်ထားပြီးလျှင်အထူးသဖြင့်အစီအစဉ်ကို execute မှ Processor ကို cores ၏ဖြန့်ဖြူးအသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အလုပ်လုပ်ဖို့ Kaspersky Anti-Virus ကိုတဦးတည်း Processor ကို core ကိုရွေးချယ်ခြင်း, ငါတို့အနည်းငယ်ကြစေပေမယ့်အတွင်းဂိမ်းနှင့် FPS အရှိန်မြှင့်နိုင်ပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, လျှင်သင်ပြင်းထန်စွာကွန်ပျူတာသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုတဦးတည်းနည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ သငျသညျအကြောင်းရင်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်ပါတယ်တွေ့: Computer ကိုရပ်နားမှုများ
ယုတ္တိပရိုဆက်ဆာများ၏တာဝန်ကျတဲ့နေရာက Windows7နဲ့ Windows အတွက်တိကျတဲ့အစီအစဉ်ကို 8
ဤရွေ့ကားလုပ်ငန်းဆောင်တာကို Windows 7, Windows 8 နဲ့ Windows Vista မှာအလုပ်မလုပ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့်အဆုံးစွန်တွင်, ငါမဆို။
Windows ကို Task Manager ကိုစတင်:
Windows7ကိုမှာ "လုပ်ငန်းစဉ်" tab ကိုဖွင့်လှစ်
Windows 8 ကိုမှာ "အသေးစိတ်" ကိုသွားပါ
ညာဘက်ကိုသင်အကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဆက်စပ်မီနူးထဲမှာ "တူအမေး" ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဝင်းဒိုးကို "လုပ်ငန်းရှင်များအဘို့အ Value ကို" သင် program ကိုသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောအမူအရာကို CPU ကို cores (သို့မဟုတ်မဟုတ်ဘဲယုတ္တိပရိုဆက်ဆာ) ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည့်အတွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
program ကို execute မှယုတ္တိပရိုဆက်ဆာများ၏ရွေးချယ်မှု
တစ်ဦးအထူးသဖြင့် processor ကိုအမာခံ (ယုတ္တိ Processor ကို) အပေါ်တစ်ဦး program ကို run ဖို့ကိုဘယ်လို
Windows 8 နဲ့ Windows7ကသင်ကအချို့သောယုတ္တိပရိုဆက်ဆာကိုအသုံးပြုပါရန်စတင်သောအခါဒါလျှောက်လွှာကို run ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကို run လျှောက်လွှာသည့်အရိပ်အယောင် parameters တွေကိုနှင့်အတူလိုက်နာမှုအကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်။ ဥပမာ:
က c:  windows  system32  cmd.exe / / ဆှဖှေဲ့ 1 software.exe start C
ဒီဥပမာထဲမှာ, လျှောက်လွှာ software.exe 0th (CPU ကို 0) ယုတ္တိ processor ကို အသုံးပြု. ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါဆှဖှေဲ့ပြီးနောက်ပုံကအမြဲတမ်းအခြို့သောယုတ္တိ processor နဲ့စတင်သည်နိုင်အောင်တူညီသော command ကိုလျှောက်လွှာဖြတ်လမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ပါသည်ယုတ္တိ Processor ကိုအရေအတွက်ကို + 1. ဖော်ပြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မလျှောက်လွှာတဦးတည်းယုတ္တိ Processor ကိုထက်ပိုပြီး, ဒါပေမယ့်တော်တော်များများသုံးစွဲဖို့ဒါမှ parameter သည်လွန်သွားဖို့ဘယ်လို, သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာမတှေ့နိုငျတယျ။
UPD: ငါဆှဖှေဲ့ parameter သည်ကို အသုံးပြု. အကြိမ်ကြိမ်ယုတ္တိပရိုဆက်ဆာပေါ်တွင် app ကို run ဖို့ဘယ်လိုရှာပါ။ hexadecimal format နဲ့မျက်နှာဖုံးကိုညွှန်း, ဥပမာသင်ကပရိုဆက်ဆာ 1 အသုံးပြုချင်, 3, 5, 7, အသီးသီးက 10101010 သို့မဟုတ် 0xAA တစ်ဦး / ဆှဖှေဲ့ 0xAA လွန်သွားပါလိမ့်မယ်။